Ugaaska Beesha Habar Eji/ Ceyr ee Habar Gidir Ugaas Xaashi oo ku eedeeyey qaar ka mid ah Xildhibaanada Gobolka Shabeelaha Hoose hurinta dagaalka ka soconaaya Gobalka – idalenews.com
Xilidhibaano ka mid ah kuwa baarlamaanka Soomaaliya, ayaa waxaa lagu eedeeyay xiisad ka taagaan maalmahan gobolka Shabeelaha Hoose deegaano ka mid ah hurinayaan. Dagaal beeleedyada ka taagan gobolka ee u dhaxeeya Habar-Gidir iyo Biyo-Maal ayaa Ugaas Xaashi Ugaas Axmed oo sheegta inuu ka mid ah odayaasha kasoo jeeda beesha Habar-Gidir ee gobolka Shabeelaha Hoose wuxuu sheegay inay qeyb ka yihiin xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Halkan ka Dhageyso Ugaas Xaashi Ugaas Axmed
Hase ahaatee Ugaas Xaashi Ugaas Axmed oo kasoo jeeda mid kamid ah dhinacyada dagaalamaya ayaa iclaamiyay dagaal kale oo cusub isagoo dhanka kale sheegay in dad badan aad loogu xasuuqay gobolka Sh/Hoose.
“In dadkii meesha joogay afka loo soo duubrtay oo meydkoodii la gubay, odayaal la dilay, beerahoodii iyo guryahoodii lagubay, waliba waxaa jira arimo kale oo caado Soomaali ulaheyn in qof Soomaali ah oo ladilay hadana meydkiisa lagubay”ayuu sheegay Nabadoon Ugaas Xaashi.
Ugaaska, ayaa sheegay in xilligan wax laga xumaado ay tahay in xildhibaan Qaran uu qeyb ka qaato dagaal iyo calaad Beeleed, isagoo sheegay in loo baahnaa inay ka qeyb qaataan xalinta balse aan looga baahneyn inay sii huriyaan.
Wuxuu sheegay in xiisadda iyo dagaalada ka tagaan deegaano ka mid ah gobolka ay kala hadleen dowladda Soomaaliya dhowr jeer oo hore balse wuxuu sheegay kuna dhaliilay inay iska indho saabtay.
Waxa uu ku hanjabay in haddii aan wax laga qaban nimankaas ay beesha Habar Gidir jawaab bixin doonto.
“Waxaa nalgu qasbayaa inaan difaacu nafsi galno, haddii aan nimankaas na laga qaban dhiib badan ayaa daadan doonnaa, waana la arki doonaa” ayuu yiri.
Wali kama aysan jawaabin xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee eedeynta loo jeediayay inkastoo aan magacyadooda la carabaabin .
Deegaano iyo Degmooyin ka mid ah Shabeelaha Hoose, waxaa ka taagan dagaal Beeleed sababay dhimasho iyo dhaawac aad u badan oo loo geystey dhinac ka mid ah dhinacyadii dagaalku u dhaxeeyey oo si lama filaan ah weerar loogu soo qaadey, ma jirto ilaa iyo hadda cid u istaagtay xalinta arintaas , waxaana isi soo taraya baaqyada iyo eedeymaha ku aadan arintaas.